Inona no atao hoe fahatsapana? Ny fiheverana dia ny isan'ny eyeballs mety hitranga amin'ny tantaranao na ny lahatsoratry ny media sosialy miorina amin'ny mpamaky / mpijery tombanana ny fivoahana / loharano. Amin'ny taona 2019, ihomehezana any ivelany ny fahatsapana. Tsy fahita matetika ny mahita fiheverana amina miliara. Misy olona 7 lavitrisa eto an-tany: manodidina ny 1 miliara amin'izy ireo no tsy manana herinaratra, ary ny ankamaroan'ny hafa tsy miraharaha ny lahatsoratrao. Raha manana fahatsapana 1 miliara ianao fa mivoaka
Talata, Janoary 22, 2019 Talata, Janoary 22, 2019 Douglas Karr
Indraindray ny teny hoe fanakorontanana dia misy dikany ratsy. Tsy mino aho fa ny varotra niomerika ankehitriny dia voasakantsakan'ny teknolojia maoderina, mino aho fa nampitomboiny. Ireo mpivarotra izay mampifanaraka sy mandray ireo haitao vaovao dia afaka manavakavaka, mandray anjara ary mifandray amin'ny vinavinany sy ny mpanjifany amin'ny fomba misy heviny kokoa. Ny andro andiany sy ny fipoahana dia miova ao aoriantsika satria lasa lasa tsara kendrena ny rafitra ary maminavina ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny orinasa.
Inona no atao hoe Chatbot? Maninona no mila azy ireo ny paikadim-barotrao
Zoma, Aogositra 12, 2016 Zoma, Aogositra 12, 2016 Douglas Karr
Tsy dia maminavina be aho momba ny ho avin'ny teknolojia, fa rehefa mahita ny fandrosoan'ny teknolojia aho dia matetika no mahita ny mety ho an'ny mpivarotra. Ny fivoaran'ny faharanitan-tsaina artifisialy miaraka amin'ny loharanom-pitaovana tsy voafetra an'ny bandwidth, ny hery fanodinana, ny fahatsiarovana ary ny habaka dia hametraka chatbots eo afovoan'ny mpivarotra. Inona no atao hoe Chatbot? Chat bots dia programa informatika izay maka tahaka ny resadresaka amin'ny olona mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy. Afaka manova ny